Radisson Hotel Boka mabhanga pa Africa: 11 mahotera matsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Radisson Hotel Boka mabhanga pa Africa: 11 mahotera matsva
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Kufamba Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Investments • Madagascar Kuvhuna Nhau • nhau • South Africa Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Radisson Hotel Group yakawedzera mahotera matsva gumi nemaviri mu Africa mukati memwedzi mipfumbamwe yekutanga ya11, ichikurudzira kuwedzera kwayo mukondinendi yose. Izvi zvinounza Portfolio yeAfrica portfolio kune angangoita 2019 mahotera uye pamusoro pe100 makamuri ari kushanda uye ari kuvandudzwa munyika makumi matatu nemaviri eAfrica uye akasimba panzira yekusvika 17,000+ mahotera uye 32 makamuri na130.
Andrew McLachlan, Mutevedzeri Mutevedzeri weMutungamiri, Kubudirira, Sub Sahara Africa, Radisson Hotel Boka, rakati: “Rave riri gore rakasimba kwazvo kuRadisson Hotel Group, kunyanya muAfrica, kondinendi yatinotenda nayo kwazvo. Gore rino takasaina chibvumirano chitsva chehotera mazuva ese makumi maviri neshanu, rimwe nerimwe rakaenderana nezano redu rekusimudzira iro rinosanganisira kuunzwa kwemakemikari matsva uye kukura kwakayerwa mumaguta akakosha uko kwatinogona kukudziridza nekushandisa mahotera akawanda mukati meguta rimwe chete. Izvi zvinoguma nemashandisirwo mazhinji ekushandira pamwe nemari yemubhadharo kuhotera imwe neimwe iri muguta rimwe chete. Isu tiri parizvino takanangana nemakumi maviri nemakumi matanhatu emaguta makuru mu Africa uye tine rekodhi rekodhi kana imwe ichienzanisa saizi yepotifoliyo yedu muAfrica kwemakore 25 atanga tichishanda mukondinendi. "Tinodada kuti chiratidzo chedu, Radisson Blu, chegore rechipiri mumutsara chakawana nzvimbo yepamusoro sehotera inokura nekukurumidza muAfrica, maererano neW Hospitality Pipeline Report."
Tim Cordon, Area Senior Mutevedzeri weMutungamiri, Middle East & Africa, Radisson Hotel Boka, yakati: "Nemhando yedu nyowani yekushandisa, isu takatyora marekodhi mu2018 nekuwedzera kweMGOP margins mumusika wega wega, kunyangwe paine kuderera kwehuwandu. Gore rino tinoramba tichidaro nezviyero zvakasiyana-siyana zvakawanikwa, senge mari yemuboka iri kuwedzera ne14%, kuwedzera kwe30% muRadisson Rewards Misangano mari, mibairo inopfuura makumi mashanu yakahwinwa uye 50% emahotera eRadisson muAfrica ichichengetedza Safehotels certification. Takaisa pasi rose kutanga mukuchengetedzwa kwehotera uye kuchengetedzwa neRadisson Blu Hotel & Musangano Wenzvimbo Niamey kuchengetedza dura repamusoro soro reSafehotels certification, Executive, mazuva matatu chete mushure mekunge hotera yakavhurwa muna Chikumi 90. , tichiwedzera boka revatsigiri vemahotera nevaridzi vedu. ”
Achitaura nezvehurongwa hweGroup hweEast Africa hwebudiriro, McLachlan akati, "Tichienderana nechirongwa chedu chemakore mashanu ebudiriro, tiri kutsvaga zviyero mumaguta akakosha anoshanda, seAddis Ababa, Nairobi, neKampala. Kune mikana mikuru muEthiopia nekuda kwehuwandu hwevanhu uye kurerukirwa kwekuwana nendege, nendege inotungamira yeAfrica, Ethiopian Airlines. Addis Ababa ine mukana wekutambira yega yega mashanu edu anoshanda mahotera emahara mu Africa. Iyi mikana haisi yezve nyowani dzekuvaka mahotera asiwo neyekushandurwa kwenzvimbo. East Africa inopa yakasarudzika musango nemahombekombe mikana. Tiri kuongorora zvirongwa zve eco-Tourism, tichishandisa National Parks muUganda, Rwanda, neKenya. Panyaya yekutarisira kumahombekombe, tiri kuongorora mikana muMombasa, Zanzibar, Dar es Salaam neDiani. ”
Parizvino gore rino, Radisson Hotel Group yakavhura mahotera maviri mu Africa; Radisson Blu Hotel & Musangano Wenzvimbo, Niamey - yekutanga uye chete 5-Star hotera yepasirese yemhando yepamusoro munyika pamwe nekutangisa kweboka kuAlgeria nekuvhurwa kweRadisson Blu Hotel, Algiers Hydra. Radisson Hotel Group yakarongerwa kuvhura mamwe mahotera maviri gore risati rapera, nekuvhurwa kwehotera yechitatu muKenya, Radisson Blu Hotel & Residence Nairobi Arboretum muna Gumiguru uye Radisson Blu Hotel Casablanca yakarongerwa kuvhurwa munaNovember, zvichiratidza kupinda kwekutanga kweboka iri guta.
Pamusoro peiyo mahotera matanhatu akasainwa muEgypt kutanga kwegore rino, madhiri emahotera matsva akasara anosanganisira:
Radisson RED Johannesburg Rosebank, Chamhembe Afrika
Kuvakira pakubudirira kweRadisson RED hotera brand, iro boka rakangosheedzera kusaina kweyechipiri Radisson RED hotera muSouth Africa. Yakarongerwa kuvhura muna Kukadzi 2021, iyo Radisson RED Hotel Johannesburg, Rosebank ichasvika ichizungunusa indasitiri yekugamuchira vaeni muguta hombe muSouth Africa.
Ihotera iri ichave iri muOxford Parks, inovhenganiswa-yekushandisa precinct inosanganisira mahofisi eprimiyamu, mafurati uye anotsigira zvitoro neresitorendi, ese ari munzvimbo yepamusoro yepamusoro, inochengetwa pachivande uye inofamba nzvimbo yeruzhinji.
Iyo nyowani-yekuvaka, 222-kamuri Radisson RED Hotel Johannesburg, Rosebank ichave neyakajairwa studio uye masuti mune akashinga dhizaini. Ihotera yacho ichave neakakurumbira Radisson RED chikafu uye chinwiwa pfungwa uye magariro, senge iyo 'zuva rese rekudya' Oui Bar & Ktchn. Ichitevera tsoka dzehotera yehanzvadzi yayo muCape Town, yakavhotera nzvimbo yepamusoro padenga remba muguta, Radisson RED Johannesburg, Rosebank ichazvirumbidzawo pamusoro penzvimbo yepamusoro padenga repabha uye terace. Denga remba rinosanganisirawo dziva rekushambira uye imba yekusimbisa muviri, ichipa vashanyi sarudzo dzakasiyana siyana kuti vadzikame, vese vachiri kutsvagira meso muJohannesburg.
Radisson Hotel La Baie d'Alger Algiers, Algeria
Radisson Hotel La Baie d'Alger muAlgiers ihotera yechipiri yeBoka muAlgeria uye hotera yekutanga ine zita reRadisson munyika.
Ihotera nyowani-yekuvaka yakarongerwa kuvhura muna 2022, iri munzvimbo yeEl Hamma. Izvi zvinoreva kuti ichave iri nyore kusvika kune dzakakurumbira nzvimbo dzekutandarira dzakadai seBotanical Garden yeEl Hamma, iyo Martyr's Chirangaridzo uye iyo Bardo National Museum yePrehistory uye Ethnography. Iyo iri zvakare padyo nePort yeAlgiers, chiteshi chengarava chikuru cheAlgeria chekushambadzira kwemakungwa.
Ihotera ine makamuri zana nemakumi masere nesere - ine makamuri akajairwa, masutu makuru uye masutu - ichaendesa chiitiko chechokwadi cheRadisson nekubvumira vashanyi kuti vanzwe kuzorora mukati medzimbo dzinozorodza. Vashanyi vachakwanisa kudya chikafu chemuno nevekunze mune yekudyira yemazuva ese-yekudya vachinakirwa nezvikafu zvishoma uye zvinwiwa zvinozorodza munzvimbo yekutandarira. Ihotera iri 184sqm yemisangano uye nzvimbo yezviitiko ichave nemakamuri mashanu emusangano-we-iyo-musangano uye imwe nzvimbo yemusangano. Nzvimbo dzekuzorora dzinosanganisirawo yakakwana yekurovedza muviri uye spa.
Portfolio yemahotera matatu muMadagascar:
Iyo Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront uye Radisson Hotel Antananarivo Waterfront ichave yakamisikidzwa munzvimbo yepakati pamharadzano yepakati peguta mune chikuru bhizinesi nedunhu rezvokutengeserana. Iine magedhi matatu ekupinda, mahotera achange aine mukana unrivaled kuenda kuAntananarivo International Airport, isingasviki maminetsi makumi matatu. Inowanikwa muWaterfront, nzvimbo yakanyarara inochengetedzwa (30-hour yakagadzirirwa CCTV system) uye yakakomberedzwa nedziva hombe nenzvimbo dzakawanda dzinosanganisira maresitorendi, mall, uye cinema.
Imba yechitatu, Radisson Serviced Apartments Antananarivo Guta Center, iri munzvimbo ine hupenyu mukati meguta, yakakomberedzwa nemabhawa, maresitorendi pamwe nemabhangi makuru, mahushumiri, uye yekare Presidential Palace.
Ruzivo urwu rwakagovaniswa kubva kuAfrica Hotel Investment Forum (AHIF) inoitika 23-25 ​​Nyamavhuvhu 2019 - Sheraton Addis, Ethiopia.
Malta Iye Zvino Kugamuchira Makadhi Ekudzivirira eAmerica